ကင်တားနားနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆွေးနွေး
ကင်တားနားနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆွေးနွေး မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနားနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဒီကနေ့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း နေအိမ်မှာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ 2012-08-02
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂ ရက်က ကုလ လူ့အခွင့်အရေး အထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနားနှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း နေအိမ်တွင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနေစဉ်။ photo : NLD Information Committee
ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအုန်းကြိုင်က ဆွေးနွေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တစုံတရာ ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
"မနက်က ၉ နာရီကနေပြီးတော့ ၁၀ နာရီခွဲအထိ မစ္စတာ ကင်တာနားနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ခြံထဲမှာ ဆွေးနွေးကြတယ်။ ဆွေးနွေးပြီးတဲ့ အခါကျတော့ သတင်းစာ ဆရာများနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ မလုပ်ဘူး။ ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် တချို့တောင်မှ ခြံထဲကို ဝင်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့် မရဘူး။ မစ္စတာ ကင်တားနားကလည်း ပြန်အထွက်မှာ တစုံတရာ သတင်းထောက်တွေရဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေကြားသွားတာ မရှိဘူး"
ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစုံတရာ ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မစ္စတာ ကင်တားနားတို့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်က လက်ရှိ ပြဿနာတွေကို အဓိကထားပြီး ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးခဲ့ဖွယ် ရှိတယ်လို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
မစ္စတာ ကင်တားနားဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီးနောက် ညနေပိုင်းမှာ နေပြည်တော်ကို ရန်ကုန်မြို့ကနေ ထွက်ခွာ သွားရောက်ကြောင်း ရန်ကုန် ကုလ သမဂ္ဂရုံး ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဦးအေးဝင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။
"မစ္စတာ ကင်တားနာက အခုကတော့ နေပြည်တော် သွားနေပါတယ်ခင်ဗျ။ မနက်ဖြန်ကျမှ နေပြည်တော်က အကြီးအကဲတွေနဲ့ တွေ့ပါမယ်"
မစ္စတာ ကင်တားနားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေအတွင်း အင်းစိန်ထောင်ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတချို့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့သလို ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ၊ တခြား ကျောင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး စစ်တွေမြို့နဲ့ မောင်တောမြို့တွေက ရခိုင် တိုင်းရင်းသားနဲ့ မူဆလင် ဒုက္ခသည်တွေကို သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း မစ္စတာ ကင်တားနားဟာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဖို့ စီစဉ်ထားသလို လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံမယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို ခြောက်ကြိမ်မြောက် ခရီးစဉ်အဖြစ် ရောက်ရှိလာတဲ့ မစ္စတာ ကင်တာနားဟာ မနက်ဖြန် ညနေပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ပြန်လည် ထွက်ခွာပါလ်ိမ့်မယ်။
မစ္စတာ ကင်တားနားရဲ့ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး NLD နာယက ဦးတင်ဦးနဲ့ RFA က ကိုနေရိန်ကျော် ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားတာကို နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စား လှယ် ဒေသခံတွေနဲ့ ဆွေးနွေး
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး လိုအပ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား ကွန်မင့်များ
why you all doing so the words?
I think there is something wrong,,
do not need us into conflict with each other.......
because my opinion does not matter Rohingya regards to what we disseminate what they were citizens of Myanmar is also why do we deny?
Rakhine history perhaps we do not know ... they are locals had nothing to do with the time period when the Burmese government ...
because before this is not the ruling Burmese Arakan ..
they haveahistory of their life.
when the Burmese Arakan so in truth we have learned them ...
Today we mention racism ..
I disagree with the racist,,,
they are citizens of Myanmar.
if notalarger problem we face.
justice now because the world does not like the stone age.
the truth will come from in history ..
Aug 04, 2012 01:47 PM
I wanna Burmese Muslim also have to tell, OIC and UN they are not our people, they try to migrate from neighbor country Bangladeshi. If they(OIC or third countries ) want them, we will send for them feel free. Because we do not want some people throwing the rubbish into our country. Aug 03, 2012 01:12 AM
I refer to [အမည်မဖော်လိုသူ] comment: asam and manipur are also the burmese colonial region. They cannot claim for citizenship when they are independent... Can Myanmar claim for UK citizenship because Myanmar WAS belong to british before??????? Aug 02, 2012 09:29 PM
Don't blame Daw Su.
Will Thai or Malaysia Government give citizenship to illegal migrant workers in their country?
Every illegal migrant has to go back home when the time has come.
Bengali Rohingya is notaethnic on Burmese and in fact they are Bangladeshi.
Burmese Muslim is nothing to do with Bengali Rohingya Muslin. Burmese Muslin is Burmese citizen and Bengali Rohingya is not. Aug 02, 2012 03:24 PM
if the situation is like this, how will un consider about the asam and manipur. Before british colonial those2region are belong to burma.
Aug 02, 2012 10:19 AM